Oral Turinabol (Oral Tbol) vovoka (2446-23-3) ≥98% | AASraw vovoka
/ Products / Anabolika Steroids / Serasera testosterone volo / Oral Turinabol (Oral Tbol)
SKU: 2446-23-3. Sokajy: Serasera testosterone volo, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra avy amin'ny gram ka hatramin'ny baikon'ny Oral Turinabol (Oral Tbol) (2446-23-3), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Oral Turinabol (Oral Tbol) volo video
Oral Turinabol (Oral Tbol) vovoka ireo karazana fototra
Name: Oral Turinabol (Oral Tbol) vovoka
Meny fitetezana 314.63200
Color: Avy amin'ny fotsy hoditra
Oral Turinabol (Oral Tbol) fampiasana vovoka amin'ny tsingerim-panafody steroids
Oral Tbol (Oral Turinabol) vovoka
Ny Orolina Turinabol dia antsoina koa hoe Oral Tbol (CAS 2446-23-3), OT, sns.
Ny torinabol ny oral dia matetika ampiasaina am-bava. Ho an'ny lahy, matetika ny 15mg-40mg isan'andro, tsy mihoatra ny herinandro 8; Ho an'ny vehivavy, matetika 2.5-5mg isan'andro, tsy mihoatra noho ny herinandro 6.
Ny ORAL T-BOL dia novolavola nanaraka danabol. Ny oral t bol dia mamela ny fivoarana goavana tsy miteraka tahirin-drano toy ny danabol. Ny fihetsika kely dia kely kokoa nefa azo antoka ny fandrosoana. Ity fanomanana anabolika ity dia tokana amin'ny famoahana ny vokatra voajanahary avy amin'ny testosterone, ny zava-misy ateraky ny fitsaboana amin'ny faran'ny fitsaboana dia ny haavon'ny natiora voajanahary. Tsara ny manohy mampivelatra ny hozany mandritra ny fotoana maharitra.
Ny Chlorodehydromethyltestosterone, anarana manerantany ho an'ny marika marika Oral Turinabol, dia vokatra mahomby avy amin'i Dianabol. Ity steroide oral io dia fifandimbiasana eo amin'ny mandrandrostenolone sy clostebol (4-chlorotestosterone), izay manana fototra mitovy fototra tahaka ny Dianabol miaraka amin'ny fanovana 4-chloro fanovàna clostebol. Io fanovàna io dia mahatonga ny chlorodehydromethyltestosterone miana-dolom-behivavy Dianabol, ilay steroid vaovao izay tsy misy fatran-kozatra ary tsy dia misy dikany firy ny androany raha oharina amin'ny mpifaninana aminy malaza kokoa. Ny fihetsika anabolic ny chlorodehydromethyltestosterone dia somary ambany kokoa noho ny an'ny Dianabol, fa kosa mitazona fifandanjana kokoa amin'ny anabolika amin'ny endriky ny androgenic. Midika izany fa amin'ny fampihenana ny asan'ny tantsaha, ny chlorodehydromethyltestosterone dia mety tsy hamokatra ny androgenic effects.
Ny doka iraisan'ny Oral Turinabol dia heverina ho 5 mg isan'andro; Tsy misy mihitsy ny toro-lalana tokony hosoratana. Ao amin'ny kianja ara-panatanjahan-tena, ny dosage mahazatra isan'andro dia mianjera ao amin'ny 15-40 mg, nalaina tao anatin'ny cycles izay maharitra mihoatra ny herinandro 6-8 mba hampihenana ny hepatotoxicity. Ity sehatra ity dia ampy ho an'ny fitomboana misim-bolana sy ny tanjaky ny levenina. Io fanafody io dia matetika ampiasaina ho toy ny pre-fifaninanana na fandefasana steroid ho an'ny tanjona fanabeazana, ary tsy heverina ho toy ny mpilatsaka an-tsokosoko noho ny tsy fisian'ny estrogenicity. Ny atleta amin'ny fanatanjahan-tena izay tena haingana dia ny fifantohana amin'ny ankapobeny dia mahita tsara kokoa amin'ny chlorodehydromethyltestosterone, ny fahazoana tombontsoa azo avy amin'ny anabolika tsy voatery mitondra ny rano fanampiny na ny lanjany matavy.
Fampiasana amin'ny lehilahy Vehivavy
Ny doka iraisan'ny Oral Turinabol dia mihevitra fa 1-2.5 mg isan'andro; Tsy misy mihitsy ny toro-lalana tokony hosoratana. Ao amin'ny kianja ara-panatanjahan-tena, ny vehivavy dia mitazona takelaka 5 mg tokana isan'andro, nalaina tao anatin'ny cycles izay maharitra mihoatra ny herinandro 4-6 mba hampihenana ny hepatotoxicity. Ny herisetra mampihetsi-po dia mety tsy azo ampiasaina amin'io fampiasana io. Matetika ny doka avo lenta dia matetika ampiasaina amin'ny atleta vehivavy ao amin'ny programa doping an'ny DDR fahiny, fa matetika ny manimba ny vokatra mahery vaika manimba.
Ny antsasaky ny fiainana an-tsoratra ara-tsiansa taorian'ny fitantanana IV dia ora 16; Na izany aza, ny antsasaky ny orana dia tsy voatery ho toy ny 1. Amin'ny ankapobeny, ny antsasaky ny fiainana amin'ny fitantanana ny vavany dia lava noho ny an'ny fitantanana IV, na izany aza, amin'ity tranga ity dia mety ho fohy kokoa noho ny famoizana metabolism voalohany ary mampihena ny plasma peak raha oharina amin'ny dose1 IV. Ny taratasy hafa dia manolotra ny antsasaky ny antsasaky ny fiainana2. Ny tombatombana tsara dia farafahakeliny farafahakeliny mandritra ny antsasaky ny androm-piainan'io steroid io miaraka amin'ny lanjany marina eo anelanelan'ny 12 sy 20 ora. Ny fisian'ny metabolites amin'ity steroid ity dia efa ela no ahemotra aorian'ny fialan-tsasatra mandritra ny antsasaky ny androm-piainany3.
Ny mpampiasa dia nitatitra fa ny fanesorana be loatra ny testosterone voajanahary voajanahary raha mampiasa Oral Turinabol. This steroid is toxic toxins but probably only slightly more toxic than doses of methandrostenolone. Ity steroid ity dia fantatra tsara amin'ny anjara asany amin'ny fandaharan'asam-pokonolona ataon'ny fanjakana amin'ny programa doping an'ny Lalao Olaimpika Afovoany Atsinanana teo aloha. Ity fanafody ity dia nomena ny atleta lahy sy vavy ho fampiroboroboana ny atletisma amin'ny Lalao Olaimpika. Na dia notsaboina ihany aza ny lehilahy, ny vehivavy dia nifantoka satria namaly tsara kokoa ny fitsaboana. Ny dônesan'ny 10 amin'ny 20 mg isan'andro dia nahatonga ny fitomboan'ny fampisehoana amin'ny vehivavy. Ity programa ity koa dia misy fanafody hafa toy ny mestanolone, ny 11-beta hydroxy form ny Oral Turinabol, 4-chloro-methyltestosterone, 4-chloro-mestanolone, methandrostenolone, testosterone ary nandrolone esters ary koa ny fitsaboana sasany sy hormones peptide. Na izany aza, i Oral Turinabol dia ny fifantohana satria toa nitatitra ny vokatra tsara indrindra tamin'ny 4.
Oral Turinabol dia naseho nandritra ny taona vitsivitsy teny amin'ny tsenan'ny fiverenan'ny olona mampiasa mihoatra ny 100 mg isan'andro. Amin'ity doka ity dia tsy maintsy manontany tena raha toa ka misy steroid na fitsaboana ny vokatra na raha raharaha iray fotsiny no misy "bebe kokoa".
Fampitandremana momba ny vovo Oral Tbol (CAS 2446-23-3)
Ny voka-dratsin'ny Oral Turinabol dia ampahany kely amin'ny steroid rehetra misy eto an-tany. Na izany aza dia ho hitantsika ihany koa fa mety hisy fiantraikany mafy amin'ny fahasalamana ho an'ny fo. Tokony ho azo fehezina ho an'ny olon-dehibe salama izy io saingy ho zavatra tokony hajainao izany. Samy afaka mampiasa ity steroid ity ny lehilahy sy ny vehivavy.
Na dia ny chlorodehydromethyltestosterone aza dia voasokajy ho steroide anabolic, ny androgenic effects dia mbola azo atao miaraka amin'ity vatana. Anisan'izany ny fitrandrahana ny hoditra, ny akne, ary ny fitomboan'ny vatana. Ny dose avo kokoa noho ny fanoroana araka ny tokony ho izy dia mety hitarika vokatra toy izany. Ny steroids anabolic / androgenic dia mety hampitombo ny fihenan'ny lehilahy amin'ny volo. Ny vehivavy dia nampitandremana ihany koa ny mety ho virilizing vokatry ny steroids anabolic / androgenic. Anisan'izany ny fanalefahana ny feo, ny tsy fanarahan-dàlana, ny fiovan'ny tarehin'ny hoditra, ny fitomboan'ny volo, ary ny fanitarana ny clitoral. Ny chlorodehydromethyltestosterone dia tsy mihen-danja loatra avy amin'ny enzyme 5-alpha, ka noho izany dia tsy miova tanteraka ny endrogenicity azy noho ny fampiasana simenitra na diteasteride
Ny chlorodehydromethyltestosterone dia c17-alpha alkylated compound. Io fiovana io dia miaro ny zava-mahadomelina amin'ny fanafoanana ny aty amin'ny aty, ka mamela ny ampahany betsaka amin'ny fidirana amin'ny zava-mahadomelina ao amin'ny rà mandriaka manaraka ny fitantanana am-bava. C17-alpha alkylated steroids anabolic / androgenic may be hepatotoxic. Mety ho simba ny atin'ny aretina ny aretina maharitra na avo lenta. Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy no mety hampivelatra ny fiainan'ny olona. Tsara ny mitsidika dokotera mandritra ny diany isan-taona mba hanaraha-maso ny asan'ny fo sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Ny fitsaboana amin'ny steroids c17-alpha alkylated dia matetika voafetra amin'ny herinandro 6-8, amin'ny ezaka mba tsy hisakanana ny fihenan'ny aty. Ny fampiasana fanafody fanindronana amin'ny fery fanampiny toy ny Liver Stabil, Liv-52, na Essentiale Forte dia voatery haka ny hepatotoxic anabolic / androgenic steroids.
Ny steroids anabolic / androgenic dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny kolera seroma. Tafiditra ao anatin'izany ny firosoana hampihenana ny soatoavina cholesterol HDL sy hampitombo ny soatoavina cholesterol LDL (ratsy), izay mety manova ny HDL amin'ny LDL balandina amin'ny lalana iray izay manimba ny aretina arteriosklerose. Ny fiantraikan'ny fiantraikan'ny steroid anabolika / androgenika amin'ny sera lipida dia miankina amin'ny doka, ny fizotry ny fitantanana (oral vs. injectable), karazana steroid (aromatizable na tsy aromatizable), ary ny lanjan'ny fanoherana ny metabolism hepatika. Ny Chlorodehydromethyltestosterone dia manana fiantraikany goavana amin'ny fitantanana ny cholesterol amin'ny hepatika noho ny toetra tsy voajanahariny, ny fanoherana ara-tsakramenta amin'ny famaranana ny atiny, ary ny fizotran'ny fitantanana. Ny steroids anabolic / androgenic dia mety hanimba ny tosidra sy ny triglyceride, hampihenana ny fialana amin'ny fiterahana, ary ny fanampiana dia miteraka hypertrophy, izay mety hampidi-doza ny aretim-panafem-pandrenesana sy ny aretin'ny haza.
Mba hampihenana ny fihenan'ny kardia fitsaboana dia tolo-kevitra ny hihazona fandaharan'asa fanatanjahan-tena ho an'ny fivalanana sy fihenam-bidy ny fihinanana tsiran-tanety, cholesterol, ary ny tsiranoka tsotra amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fitantanana ny AAS. Ampitomboina amin'ny trondro fimailo (gramnôma 4 isan'andro) ary omeo azy ny karazam-kolontsaina voajanahary / antioxidant, toy ny Lipid Stabil na vokatra misy zavatra hafa azo ampiasaina.
Side Effects (Famaritana ny testosterone)
Ny steroid rehetra anabolika / androgenika rehefa nalaina amin'ny doses ampy mba hampiroboroboana ny fantsom-bozaka dia andrasana hanakana ny famokarana testosterone endogenous. Raha tsy misy ny fidirana amin'ny fitsaboana testosterone dia tokony hiverina amin'ny ara-dalàna ao anatin'ny 1-4 volana famaranana ny fisotroan-dronono ny testosterone. Mariho fa mety hitera-doza amin'ny fihanaky ny herisetra ny fitsaboana hogogonadôtôfy, izay mitaky fitsabatsabahana amin'ny fitsaboana.
Oral Tbol poopy Fanoroan-dalana hafa
Raha tsy misy ny fanadihadiana, ny vokatr'i Oral Turinabol dia ho sarobidy indrindra amin'ny atleta sy atleta izay midika hoe atleta. Tsy miresaka momba ny ratramin'ny bakteria na ny toeram-pananahana izay miaina toy ny iray, fa olona iray izay mifaninana amin'ny fanatanjahan-tena ara-batana. Ny fampiasana Oral Turinabol dia hampiroborobo ny fiantohana ny muscular, tsy ho reraka haingana izy ireo ary tokony hihatsara be ny fitomboany.
Orol Turinabol (CAS 2446-23-3)
Oral Tbol Marketing
Ahoana no hividianana vovoka Orin Turinabol (CAS 2446-23-3); Buy Oral Tbol powder from AASraw
Ny AASraw dia manome ny fahadiovana 99% Oral turinabol roatolo ho an'ny mpanao biriky na laboratoara ambanin'ny tany ho fampiasana am-bava.
FIVORIANA HO AN'NY FIANGONANA (FAHAMARINANA MALAGASY MANDRAKIZAY)
Poids 1gram (winny, anavar, dbol, OT, sns.)
1ML fanondrahana akorandriaka
Ny rano voatoto 43ML
Ireo orala koa dia hihazona izany fifantohana izany:
2.5grams vovoka (winny, anavar, dbol, OT, sns)